OkMap, ihe kacha mma maka ịmepụta ma dezie map GPS. EGO - Geofumadas
OkMap, nke kachasị mma imepụta ma dezie maapụ GPS. EGO
Septemba, 2013 Google Earth / Maps, GPS / Equipment, mbụ echiche
OkMap nwere ike bụrụ otu n’ime mmemme siri ike maka iwalite, dezie na ijikwa maapụ GPS. Na njirimara ya kachasị mkpa: Ọ bụ n'efu.
Anyị niile ahụtụla mkpa ọ dị ịhazi map, georeference ihe oyiyi, bulite faịlụ ọdịdị ma ọ bụ kml na Garmin GPS. Ihe aga-eme dịka ndị a bụ otu n’ime ihe kachasị mfe iji OkMaps. Ka anyị hụ ụfọdụ n'ime njirimara ya:
Ọ na-akwado data vector nke usoro ndị a kachasị eji eme ihe, tinyere usoro ntanetị nke dijitalụ (DEM) na data elu.
Ị nwere ike ịmepụta ụzọ ụzọ, ụzọ na egwu site na desktọọpụ wee bulite ya na GPS.
Enwere ike ibudata data weghaara GPS na kọmputa iji gosi na nyochaa ha na ụdị dị iche iche nke akụkọ na ọnụ ọgụgụ.
Site na ị jikọọ laptọọpụ na GPS ị nwere ike ịma ọkwa na map site na ị na-aga site na ihuenyo ma ọ bụrụ na ịnwe njikọ na netwọk ị nwere ike izipu data na oge.
Ọ na ejikọta Google Earth na map Google, gụnyere yana ụzọ data na 3D.
Na mgbakwunye na usoro kml na nghọta karịa ihe oyiyi jpg n'ụdị ngwakọ, ọ nwere ikike iji mepụta usoro kmz na-akpaghị aka dabara na map Garmin na usoro OruxMaps. Nke a gụnyere moseiki nke onyogho georeferenced na tinyere usoro ECW, ndị na-aga dị ka faịlụ vector na onyonyo ndị ahụ agbakọtara na kmz abịakọrọ.
Ụdị akwadoro site OkMap
Raster usoro: tif, jpg, png, gif, bmp, wmf, emf.
Modeldị ihe ntanetị ahụ na-akwado ndọtị .hgt, nke bụ DEM mepụtara site na NASA na NGA. Usoro nke OkMap na-eji bụ SRTM-3 nke nwere pikselụ nke abụọ, ihe dịka 3 mita na 90 nke abụọ SRTM-1 nke dị ihe dịka 1 mita.
Na DEM, OkMap na-enweta oke elu n'elu oké osimiri maka isi ihe ndị a weghaara, na-ekenye isi ihe ọ bụla nke faịlụ GPX dị elu; bụ nke nwere ike ịmepụta chaatị elu dị elu na njem njem.
Enwere ike ibudata data DEM na http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1
Banyere data vector, OkMap nwere ike ibudata faịlụ GPX, nke a na-ejikarị eme ihe dịka ọ bụ ụkpụrụ mgbanwe. Ọ na-akwado, ma imeghe ma chekwaa:
Ụzọ ụzọ EasyGPS
Ụzọ ụzọ ndị dị na Fugawi
Garmin POI nchekwa data
Geocaching ụzọ ụzọ
Ụzọ ụzọ OziExplorer
Ụzọ egwu OziExplorer
Ngwa ndị akwadoro, ha niile gụnyere ntụgharị faịlụ na iji GPS Beel.
Atụmatụ ndị ọzọ iji rụọ ọrụ map ndị GPS
Ihe omume a dị ka ihe dị mkpa, ma n'eziokwu ọ bụ anụ anụ na ihe niile ọ na-eme; Lee ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ iji nwalee:
Nchịkọta dị anya
Nchịkọta nke ebe
Ngosipụta Vector na raster na Google Earth
Mepee oghere ugbu a na Google Maps
Hụ ọrụ map, na .okm usoro
Foto nke Moses na Grid Generation
N'ebe ugwu dị n'ebe ugwu
Beechapụ obere map
Jiri mgbanwe nke GPS Beel
Mepụta nkedo doponymy, na GPX, faịlụ ọdịdị, POI csv (Garmin) na OzyExplorer
Nnukwu mgbanwe nhazi
Ntụle na azimuth nghazi
Ntụgharị dị n'etiti usoro mgbasa ozi dị iche iche
Ziga data na GPS
Ịgagharị na ụzọ, tinyere nsonye nke ntanetị
NMEA ikpuchi igodo
Ọ na-agụnye ọtụtụ asụsụ, gụnyere Spanish.
Ke ofụri ofụri, ihe na-akpali ngwọta maka ijikwa GPS map. Agbanyeghị na abamuru ya na-aga n'ihu maka ebumnuche igodo, n'akụkụ ndị dị ka mmiri, ịkụ azụ, ọrụ nnapụta, geocoding na ndị ọzọ bụ ndị mesiri ike na nkenke abụghị ihe dị mkpa mana arụmọrụ maka nhazi mbara ala.
Ọ bụghị sọftụwia na-anaghị akwụ ụgwọ, ọ bụ nwebisiinka, mana ọ bụ n'efu. Ọ na-arụ ọrụ naanị na Windows, ma chọọ Framework 3.5 SP1
Vidio na-esonụ na-egosi otu esi esi tinye Gọọmentị Garmin Custom na iji ngwanrọ a.
Previous Post«Previous Nweta ụdị tempụ UTM na Geographic site na ịkwalite Geofumadas
Next Post …maka ugbu a…Next »
Otu Nzaghachi “OkMap, nke kacha mma maka ịmepụta ma dezie maapụ GPS. GRATUITOUS "
Justiciero kwuru, sị:
Ọ dị mma? Thedị n'efu anaghị ekwe ka ị mee ihe ọ bụla, yabụ n'efu ọ nwere Ebe e si nweta ya ...